Harena an-kibon’ny tany: dinika hanitsiana ny fehezan-dalàna | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany: dinika hanitsiana ny fehezan-dalàna
Nitohy omaly ny fifampidinihan’ireo mpisehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany, taorian’ny fandravonana ny fakan-kevitra isam- paritra, natao ny desambra 2019 teo. Nahitana ny fanjakana, ny mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola (PTF), ireo mpandraharaha tsy miankina (vaventy sy madinika) misehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany ary ny Antenimieran’ny harena an-kibon’ny tany. Anisan’ny tinapaka ny hananganana ny vovonana hivondronan’ireo mpisehatra voalaza ireo, vaomiera mpandinika, hamaritra ny rindranasa hamoahana ny fehin-kevitra hampidirina ao anatin’ny fehezan-dalàna vaovao mifehy ny harena an-kibon’ny tany.
Marihina fa mbola hisy ny fikaonan-doha manaraka, hanatevin-daharana sy handray anjara amin’ny fifampidinihana, ka anisan’izany ny fiarahamonim- pirenena sy ny mpiantsehatra hafa, tsy mbola nandray anjara.
Efa ela ny tsirin-kevitra hanovana ny sata mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Mivoatra hatrany anefa ny toe-draharaha, arakaraka ny fivoaran’ny zava-misy. Anisan’izany ny sehatry ny solika, satria efa misy ny orinasa afaka mitrandraka fa tsy mikaroka intsony, eo koa ny fandinihana na ny fitsinjarana ny anjara renivola, na tombombarotra ho an’ny orinasa sy ny fanjakana amin’ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika. Ary indrindra ny tombontsoan’ny toerana nivoahan’ny harena an-kibon’ny tany ho an’ny tompon’andraikitra ifotony (kaominina, faritra, …), indrindra koa ny mponina.